Daawo: Hees Madaxa iyo Gacmaha lagu istaagayo oo la soo saaray. - Caasimada Online
Home Warar Daawo: Hees Madaxa iyo Gacmaha lagu istaagayo oo la soo saaray.
Daawo: Hees Madaxa iyo Gacmaha lagu istaagayo oo la soo saaray.
Hees Jadiid ah oo lagu soo aadiyay maalinta Ciida ayaa waxaa la soo galiyay qeeybta Muuqaalada Fanka Soomaaliyeed waxaana Heestaan cusub mar qura lagu dhex arkay Dhalinyaro ku istaageeyso madaxa iyo hal Gacan kuwaas oo dabadeedna si Cajiib ah ugu niikinaya.
Heestaan oo la magac baxday XAYI JACEEYL ayaa qaab ahaan waxaa saaran Music cusub waxeeyna Luuqad ama Kalmad ahaan ku baxeeysaa Luuqadaha Soomaaliga iyo afka Jarmalka. Heestaan ayaa waxaa soo saaray Fanaanka Gabyaaga ah ee kooxda Walaalaha Sii Sii Somband Cumar Cali Cumar (Cumar Sii Sii ) oo inta badan looga bartay Heeso cusub oo aanan horay loo maqal.
Kooxda dhalinyada Walaalaha Sii Sii Somband ayaa Shacbiyad weeyn helay sanadihii ugu dambeeyay ka dib markii Calanka Soomaaliyeed ay u xambaariyeen Dhalinyaro reer Yurub ah waliba soo bandhigeen dad Cadaan ah iyaga oo baraya Luuqada Afka Soomaaliga .
Halkaan ka Daawo Rag Madaxa ku istaagi kara kuna socon kara hal Gacan http://www.youtube.com/watch?v=RgfdkzLTOPk